Madda Walaabuu Press: Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo (ABO): Baatiin Eblaa Seenaa QBO Keessatti Baatii Seenaa Qabeessa
Gama kaaniin wayta ammaa kana mootummaan Wayyaanee Filannoo fakkeessaa gaggeeffatuuf dibbee rukutuu irratti argama. Ololli fedheyyuu filmaata Wayyaanee ammas moosisuuf qopheeffame kana dimokraatawaa taasisuu hin danda’u. Komishinni filannoo geggeessu, kan filuu fi filamus Wayyaanee tahuun wallaalaa jalaayyuu dhokataa miti. Dhaadannoon Wayyaanee “Aangoo humnaan arganne, waraqaan gad hin dhiifnu!” jedhus kana caalaatti dhugoomsa. Waan taheef ummatni Oromoo adddatti ammo dargaggoon filannoo dabaan guutamee fi farra Oromoo tahe kana lagatuun qabsoo bilisummaa irratti akka xiyyeeffatan ABO hubachiisa. Filannoon afarfamaa jiru Empaayera malaammaltummaa, cunqursaa fi saaminsa irratti ijaaramte tiksuu fi jireessuuf jecha abbootii irree seeressuu kan akeekkate dha.